Ukufunda iMarike ye-Forex - iiKomishoni, ukuSasaza kunye neeNdleko zokuRhweba - Funda ukuRhweba
Ukufunda iMarike ye-Forex-iiKhomishini, ukusasazeka kunye neendleko zokurhweba
Ukuhlaziywa: 18 Disemba 2019
Ngokuqinisekileyo, Forex yorhwebo iyanda. Iibroker brokerage ezininzi zivulwa ngenqanaba eliphezulu kakhulu, kwaye abantu abaninzi ngoku bayayishiya imisebenzi yabo bayokuthengisa i-forex.
Ayiyenzululwazi yesayensi malunga nokuba kutheni konke okwenzekayo kungenxa yokuba imarike ye-forex inkulu kakhulu, ilula kwaye inokubakho okukhulu kwinzuzo.
Kodwa yintoni eyenza yahluke kwezinye iimarike zezemali?
Xa ucinga ngorhwebo lwe-forex, kwaye umzekelo, ukutshintshiselana kwesitokhwe, umahluko osisiseko onjengokungazinzisi okungaphezulu, ukuthengiswa okuphezulu, amandla aphezulu, iikhomishini zorhwebo ezisezantsi kunye neendleko eziza engqondweni.
Ke, makhe sijonge ngokukodwa ukuba iindleko zorhwebo, kunye nee-commissions ze-forex, xa kuthelekiswa nezinye iimarike zehlabathi.
Kwimarike yamasheya, umrhwebi uhlawuliswa ikhomishini kumacala omabini orhwebo. Kuthetha ukuba umrhwebi wenza urhwebo ngokubambisana nomthengisi, ohlawulisa isixa esimiselweyo kurhwebo ngalunye, ngesabelo ngasinye, okanye ikhomishini ethile enikwe umda ngokuxhomekeke kubungakanani bezorhwebo. Ngapha koko, ikhomishini isetyenziswa kokubini xa kuthengwa kwaye kuthengiswa isitokhwe.
Xa ujonga kwimarike ye-forex, abathengisi be-forex abahlawulisi ikhomishini. Nangona kunjalo, abarhwebi abambalwa baya kubhengeza ukuba bayabiza ikomishini ethile njengasesitokisini.
Ke ngoko, oko kuthetha ukuba imarike ye-forex ivumela bonke abathengisi ukuba bavule kunye nezikhundla ezikufutshane ngaphandle kwekhomishini.
Kodwa abathengisi be-forex bayenza njani imali yabo?
Kangangoko babhengeza ukuba abayihlawulisi ikhomishini, abarhwebi be-forex benza nemali. Kuya kuba yinkohliso apha. Akukho khomishini zihlawuliswe ngabarhwebi-ziyinyani, kodwa abathengisi ngokulunga kwentliziyo yabo.
Ngapha koko, abathengisi be-forex baphuma phezulu, ngokoqobo ngendlela enkulu. Oko bakubizayo kwaziwa ngokuba kukusasazeka kwe-forex, ngumahluko phakathi kwexabiso eliza kuthengwa ngumrhwebi kuwe kunye nexabiso abaza kuthengisa ngalo imali.
Ke ngoko, ngokungathi ayivakali njengekhomishini, umgaqo uyafana.
Yiyo loo nto kubalulekile ukuqonda iindleko ezinxulumene norhwebo ngaphambi kokwenza izigqibo eziphambili. Umgaqo ophambili malunga nentengiso ye-forex kukuba isekwe ikakhulu kunikezelo nakwimfuno njengeentengiso ezininzi.
Umzekelo, ngemfuno ephezulu ye-USD, ixabiso layo liyenyuka ngokuchasene nezinye iimali, kwaye yindlela ekusasazeka ngayo ukuchazwa kunye nokubalwa.
Ngokungafaniyo nemarike yemasheya, ukusasazeka kuhlawuliswa kuphela kwicala elinye lentengiselwano, oko kuthetha ukuba umrhwebi akazukuhlawula ukusasazeka xa ethenga naxa ethengisa; ihlawuliswa kube kanye kwicala lokuthenga lorhwebo.
Izinto ezifanele zigcinwe engqondweni
Ngoku kuya kufuneka uqonde ukuba ukusasazeka akufani kubarhwebi abaliqela.
Abarhwebi abahlukeneyo banikezela ngokusasazeka okwahlukileyo, kwaye umahluko omncinci kunokuba ngumtshintshi womdlalo wakho ekuhambeni kwexesha.
Umzekelo, umbhobho o-5 usasazeka ngokuchasene nokusasazeka kwemibhobho emi-4; ixesha elingaphezulu, umahluko unokuba mkhulu.
Ngapha koko, ukusasazeka kuyahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lweemali ezithengiswayo kunye nohlobo lweakhawunti evulwa ngumrhwebi. Umzekelo, i-EUR / USD okanye i-GBP / iUSD yemali ngababini bezona ndawo zisasazeke kakhulu kubarhwebi, ngelixa iimali ezinesidingo esincinci zisasazeka kakhulu.
Kwangokunjalo, uhlobo lweakhawunti evuliweyo lunokuxhomekeka kusasazo olwahlukileyo, njengeakhawunti encinci inokusasazeka okuphezulu xa kuthelekiswa neakhawunti epheleleyo yesivumelwano.
Kananjalo, ukusasazeka okungaguqukiyo kuyatshintsha amaxesha ngamaxesha; yiyo loo nto kubalulekile ukuba unamathele kwinto ehlawuliswa ngumrhwebi.
Kuya kufuneka ubazi nabarhwebi ababonelela ngokusasazeka okungagungqiyo njengoko kuthintela urhwebo, ngakumbi ngexesha lokukhutshwa kweendaba xa intengiso ingazinzanga, yiyo loo nto i-inshurensi ingancedi.
Ukuba nokuqonda okucacileyo kwee-commissions, ukusasazeka, kunye neendleko zokurhweba kwi-forex yorhwebo kunokunceda nawuphi na umrhwebi ekwenzeni izigqibo ezifundisiweyo malunga nezicwangciso zabo zokuthengisa.
Ke ngoko, qinisekisa ukuba uyazi ezemali oza kuzithengisa, ukuba ziqhele kangakanani, kunye nohlobo lweakhawunti oza kuyisebenzisa, kwaye ngaloo ndlela, uya kuhlala ngaphezulu komdlalo ulungele intengiso.